अन्तिम पत्र - | Kavyalaya - काव्यालय
माफ गरिदिनु, आज पनि प्रिय शब्दको प्रयोग गरेकोमा ! अँ, साच्चै उसले त गुलाबो भन्छ रे, म चाहिँ अन्तिम पटक उसकी गुलाबोलाई बुलबुलले नै सम्बोधन गर्दै छु । पहिलोपटक प्रेमपत्र पठाउँदा पनि मेल गरेरै पठाएको थिएँ, सम्भवत; यो अन्तिम पत्र(प्रेमपत्र ???) पनि मेल गर्दैछु । थाहाछैन तिमीले यो पत्र पढ्छ्यौ पढ्दिनौ । पढिहाल्यौ भने कहिले के सोचेर पढ्छ्यौ । जे होस्, बैशाखको महिनामा लंगडो मुटुले बैसाखी टेकेर लेखेको पत्र हो यो !
सदाझैं आज पनि म बिहान अबेर नै उठेँ । तिमीलाई त मजाले याद हुनुपर्ने हो, मेरो नित्यकर्म । ल्यापटपमा वाईफाई कनेक्ट गर्दै मैले त्यही गीत घन्काएँ, जुन तिमी र म सँगै हुँदा सधैँ सुरुमा बजाउथेँ । अहिले पनि पक्कै तिम्रो दिमागमा त्यो गीतको संगीतले कब्जा गरिरहेको होला । “मुना मरेकी मदनका कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा” भनेर रामकृष्ण ढकालले गुनासो गर्दा सधैँ तिम्रो अनुहार हेर्ने बानी परेको म, आज भने भित्ताको तिम्रो तस्बिर हेर्न पुगेँ । उस्तै मुस्कान लिएर तिमी त्यो तस्बिरको सहायताले भए पनि मलाई जलाइरहेकी थियौ । पहिलोपटक यस्तो लाग्यो कि यो गीत मेरै निम्ति बनेको हो । तिमीले नै उपहार दिएको सामसुङ फोनमा (जुन तिमीले भने बमोजिम चाँडै नै त्यो तस्बिर सहित फिर्ता गर्ने नै छु)
बिहानै, तिमीलाई नै मनपर्ने टेलर स्विफट, रिङटोन बजाएर मलाई बोलाइरहेकी थिइन् । फोन पनि उनको थियो, जसले पहिलोपटक तिमीलाई र मलाई भेटाएका थिए, त्यही सुनधाराको धरहरा अगाडि । जसरी भूकम्पले धरहराको अस्तित्व नै हरण गरेको थियो त्यसैगरी तिम्रो बैशाख २५ गते हुने विवाहको कार्डले हामी बिचको मायाको धरहरा भत्काएको थियो । सुनधाराको धरहरा त जेनतेन फेरि ठडिएला, तिमी नै भन मेरो प्रेमको धरहरा अब म कसरी ठड्याउँ ?
Tower of Love by Aayushi Gajjar
“नयाँ वर्षको शुभकामना छ है हिरो !” धेरैपछि एकाबिहानै आएको उनको फोन उठाउने बित्तिकै उताबाट शुभकामना आइहाल्यो । “दिन उस्तै छ, समय त्यस्तै छ, हिजो पनि सन्त्रासमा बाँचेका थियौँ आज पनि हालत उस्तै छ, लकडाउन चलिरहेकै छ, यो नयाँ वर्ष कसरी हुन सक्छ र ? सबै कुरा पुरानै चल्दै छन्, तिमी भने नयाँ वर्षको शुभकामना बाँडिरहेछौ । साल फेरिए तापनि साथ नफेरियोस ।” भन्न नपाउँदै उनी आफ्ना गुनासोका पोका-पुन्तुरा खोल्न थाले,
“अघिल्लो वर्ष त त्यसै गयो । एउटा पनि सृजनशिल कार्य गरिएन, मनका सजिव भावनाहरुलाई निर्जीव शब्दमा उतार्ने जमर्को गरेरै भएपनि आफूलाई सृजनशिल भएको ठान्थेँ । एक वर्ष त व्यर्थ नै गए जस्तै लागिरहेको छ, खासै उपलब्धि पनि केही भएनन् अघिल्लो वर्ष त । तर आजैबाट संकल्प गरेको छु, यस वर्ष भने आफूलाई तिखार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”
एक किसिमको आनन्दको संचार भयो शरीरभरि उनको यो वाचाले ! गाउँवेशी र मेलापात, चराचुरुङ्गीदेखि दिनदुःखीसम्म सबैलाई समेटेर आफैँलाई त्यहाँसम्म डोहोर्‍याउन बाध्य बनाउने उनको लेखन शैली मन पराउने मध्यको लामो सुचीमा म पनि पर्थेँ । “तिमी पनि कलम चाहिँ निरन्तर चलाइराख्नु है!” भन्दै उनले आफ्ना शुभकामना, गुनासा र संकल्पको बिट मारेका थिए ।
आज बिहान पनि त्यहि हिजोको जस्तै सूर्य उदाएको थियो, राती आकाशमा चम्किरहेका तारा पनि पुरानै जस्तै लाग्थे । उस्तै हावा बहिरहेको छ, उस्तै सुगन्ध छर्दै फूल मुस्काइरहेछ अनि उस्तै त छु मपनि । उही महिना, दिन, गते र बार । आखिर के नै फरक भयो र ? बस् फरक यति नै थियो कि प्रत्येक नयाँ वर्षमा तिमीले शुभकामना दिन्थ्यौ यस वर्ष उनले दिए । आखिर के नै फरक रह्यो त चैत ३० र बैशाख १ मा ? तर पनि यहाँ भित्तामा झुन्डिने क्यालेन्डर फेरिन्छ्न्, पार्टी चल्छन्, १ वर्ष बूढो भएकोमा संगीतमा झुम्छन् मनुवाहरु ! बूढो हुनुसँग कस्तो आनन्द ?
नयाँ-नयाँ वाचा अनि संकल्प साचिन्छन्, ठूला ठूला कार्य थालनी हुन्छन् । बैशाख; अरु महिना भन्दा यसको बेग्लै महत्त्व छ, सायद नयाँ वर्षको प्रारम्भ यही महिनाबाट हुने भएकाले पनि होला । हरेक कुराको सुभारम्भ हो बैशाख । उजाडिएका रुखहरुमा वसन्तको आगमनसँगै सुरु हुने अर्को सुनौलो जीवनदेखि लिएर अग्निको अगाडि सात फेरा लिएर जीवनको अर्को अध्याय सुरुवात गराउन पनि सफल छ, बैशाख । रुखहरुमा नयाँ पालुवा पलाउँदा उजाड र निरस प्रकृतिमा एउटा नविन तरङ्ग थप्नेदेखि लिएर चराचुरुङ्गीले गाउने गीतहरुको मिठासमा समेत रमाउँछ बैशाख ।
बेला बेला त लाग्छ, जिन्दगीको शुरुआत नै बैशाखबाट हुन्छ होला । किसानहरुका निम्ति त झन् बैशाखको छुट्टै महिमा छ, बाली (मुख्यता तराईमा गहुँ) भित्र्याउने अनि धानको बीउ छर्ने समय यहि नै त हो, वर्षभरि जीवन धान्न सहयोग गर्ने खेतीको अध्याय यही महिनाबाट सुरु जो हुन्छ ।
Harvest @ Fizdi.com
तिमीलाई याद होला नै, हाम्रो प्रेम-सम्बन्ध पनि बैशाखमै सुरु भएको थियो । तर मलाई थाहा छ, प्रेमका वाचाहरु कहिल्यै फेरिँदैनन् । फेरिन्छन् त केवल वाचा गर्ने गरिनेहरु । नयाँ साथ र नयाँ सम्बन्ध कै निम्ति होला विद्यालयमा भर्ना पनि बैशाखमै गरिन्छ । अधिकांश प्रेमीहरुलाई विवाह बन्धनमा बाँध्न होस या सैयौं जोडीहरुका सँगै बाँच्ने-मर्ने कसमका साथमा देखेका सपनामाथि तुषारापात गर्न पनि सामेल छ यो बैशाख ! सायद यसको बारेमा तिमीलाई जति कसलाई पो थाहा होला र ?
दूरी; यो एउटा यस्तो शब्द भइसकेको छ जुन कुनै पनि प्रेमील जोडीहरु सुन्न चाहँदैनन् । दूरीको आड लिएर यहाँ कैयन् प्रेमकथाहरु प्रेमगाथामा परिणत भएका छन् । इतिहास भएका छन् । भग्नावशेष भएका छन्, भग्न भएका छन् । आफ्ना विभिन्न तर्क दिएर रोमियो-जुलियटदेखि मुना-मदनसम्मलाई दूरी कै कारण अलग्गिएका हुन् भन्ने मानिसहरुको पनि कमि छैन । लामो दूरीका प्रेम-सम्बन्धहरु टिक्दैनन् भन्दै दूरीलाई बदनाम गरिएको अघिअघि नसुनिएको पनि होइन । तर सुन्नु र भोग्नुबिचको खाडलपनि आज यो बैशाखले देखाइदिएको छ ।
धेरै हदसम्म के यथार्थ हो भने, दूरीले अपरिपक्व सम्बन्धमा आँधिबेहरी समेत ल्याउन सक्छ । खैर, ‘परिपक्व’ शब्दको त अर्थले नै त्यो अनर्थको खाली कल्पना गर्नपनि मनाही गर्छ नि, होइन र ? यस अर्थमा सायद हाम्रो सम्बन्धपनि अपरिपक्व नै थियो होला, तर म दूरीलाई कदापी दोष दिन चाहन्नँ, दिन्नँ । हामीबिच दूरी आएको थियो, दूरीको बिचमा हाम्रो सम्बन्ध होइन ।
दूरीले त झन् सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्ने होइन र ? जति टाढा, माया उति नै गाढा भन्ने गर्थे मानिसहरु, अरुको त के कुरा तिमी आफैँ पनि त भन्थ्यौ, ‘म जति नै टाढा किन न हौँ हजुर सधैँ मेरो मन मुटु मै रहनुहुन्छ’। तर कहाँ गए आज ती वाचाहरु ? कसको सौभाग्यमा ? कहाँ हराए ती कसमहरु ? कसको दुर्भाग्यबाट ? धेरैले भन्ने गरेको सुन्थेँ, मेरो सम्बन्ध त यस्तो भयो उस्तो भयो तर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइन दूरी कै बहाना हामी बिचको सम्बन्धको घाँटीपनि यसरी निमोठिएला भनेर । आफैँमा आशंका र अविश्वास जन्माएर मानिसहरु आखिर दूरीलाई किन दोष दिन्छन् ?
Long Distance Relationship @Sheroes
शंका र ईर्ष्या सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने कडी पनि हुन् अनि साथमा सम्बन्धलाई तहसनहस पार्ने तत्वपनि । दूरीले शंका बढाउला, त्यो जायज छ तर त्यो शंकाले सम्बन्धको लंका जलाउन दिने या नदिने त्यो नितान्त आफ्नो हातमा हुन्छ । शंका बढाउने उपाय/तत्व हुन्छ भने विश्वास बढाउने पनि त केही हुँदो हो ! दूरी बढ्दैमा सम्बन्धमा फाटो पक्कै आउँदैन तर त्यही सम्बन्धलाई शंकाकै भरमा समाप्त पार्दा पक्कै यादहरुको टाटो सधैँभरिलाई बसिरहन्छ पीडा बोकेर, म तिनै टाटाहरु समेटेर जिन्दगीमा अघि बढ्नेछु । घण्टौं कुराकानी अनि प्रत्येक हप्ता भेट पक्कै नहोला, दिनहुँ कुराकानी नहोला, महिनादिनमा दुःख-सुख बाँड्न पाइएला, छ महिना-वर्ष दिनमा भेट्न पाइएला; मानसिकता नबदलिए दूरीले पक्कै पनि असर पार्दैन । प्रेम विश्वासको मसिनो धागोमा अडिएको हुन्छ । जब त्यो विश्वास गुम्छ, त्यसपछिको सम्बन्ध श्वास बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ ।
एकपटक विश्वास गुमिसकेपछि फेरि सम्बन्ध पुरानो जस्तो कहाँ हुँदोरहेछ र ? त्यसकारण सर्वप्रथम विश्वासको गाँठो कसिनु आवश्यक छ । जबसम्म विश्वासको गाँठो कसिँदैन नि, तबसम्म शंकाको घेरोले बेरिरहन्छ । र आखिरी घडीमा जब टुक्रिएको विश्वासको छेस्को र शंकाको कालो बारुदको घर्षण हुन्छ तब यस्तो आगो सल्किन्छ जसको लप्कामा जलेर खरानी हुन्छ प्रेम र धुवाँ बनेर बिलाउँछ सम्बन्ध ।
Fire Rose @ roundhousepoetrycycle
विश्वासको मसिनो धागोलाई सम्हालेर राखे, सम्बन्धमा भुइँचालो कहिल्यै आउने छैन । थोरै शंका अनि धेरै विश्वास,आपसी समझदारी अनि निस्वार्थ प्रेम भए मात्र मायाको जग बलियो हुन्छ जसलाई दूरीले त के आँधिहुरीले पनि हल्लाउन सक्दैन, र यस्तै सम्बन्धमा हो सायद दुरी बढ्दा पनि माया बढ्ने । तर म यो सब तिमीलाई किन भनिरहेको छु ? जब केहीपनि पहिलाजस्तो बाँकी छैन ! मैले यो सब भन्न पक्कै सुहाउँदैन पनि त होला, तर तिम्रो आगामी भविष्य उज्जवल होस् भन्ने चाहेर तिमी सामु यो पत्र पेश गर्दैछु । प्रेमका कुरा प्रेमले लेखिएपनि के यो पत्रलाई तिमी प्रेमपत्र मानेर पढौली त ?
वसन्तको आगमनसँगै असिम हर्ष, उल्लास र उत्प्रेरणा लिएर आएको छ; बैशाख । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै सुरु हुन्छ नयाँ सोच, नयाँ सपना अनि नयाँ सम्बन्ध पनि ! प्रेम-सम्बन्ध होस् या मित्रता; सम्पूर्ण तिक्ततालाई बिर्सेर नयाँ तरिकाले एक-अर्काको जीवनमा मिठास भर्नेदेखि लिएर आजका दिनबाट कहिल्यै सम्झनामा पनि आउन नदिई जिन्दगी हाँसि-खुशी काट्छु भन्ने वाचा-कसममा पनि सरिक छ; बैशाख । बिरुवामा पालुवा पलाए जस्तै मायाका मुनाहरु पनि पलाँउछन् यो महिनामा । आपसी समझदारी अनि विश्वास बढोस्, दूरी कै कारण सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिन नपरोस् बैशाखले । तिमीलाई तिम्रो आउँदो विवाहको शुभकामना ! दाम्पत्य जीवनमा आउन सक्ने सानातिना झै-झगडाले सम्बन्ध भने नटुटोस्, जसरी हाम्रो टुट्यो । किनभने जिन्दगी च्यात्नु र टाल्नु मात्रै पक्कै होइन बुलबुल ! बैशाखमै नयाँ सम्बन्ध जोड्दै छ्यौ, वैवाहिक जीवनको भव्य शुभकामना तिमीलाई ।
– “उही तिम्रो सफलता चिताउने असफल प्रेमी !!!”